<º Gamers: Damn Castilla now available for GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
<º Gamers: Damn Castilla dia misy amin'ny GNU / Linux izao
Androany tsy mitondra vaovao aho, fa vaovao kosa, ary efa azo alaina ho an'ny GNU / Linux iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny Locomalito ary iray amin'ireo andrasana indrindra ho entina (farafaharatsiny Elav ary izaho): Damn Castilla.
Amin'ity lalao ity dia handray ny anjara asan'ny Don Ramiro, izay ny iraka dia ny fanafoanana ireo demonia izay manimba Tolomera ary dia vonjeo ny Fanjakan'i Castile.
Ny lalao dia manome voninahitra ny lalao arcade taloha, zavatra iray izay tsikaritra amin'ny sary sy ny feo, noho izany Gryzor87 naka tahaka ny puce Yamaha YM2203, be mpampiasa amin'ny arcade of the 90s, ary mampatsiahy ny angano Ghost'n'Goblins.
Miatrika lalao lehibe izay tsy tokony hohadinoina isika.
Avelako ianao amin'ny fampisehoana video ny lalao.
Toy ny mahazatra ho ahy dia azonao atao ny mametraka ny lalao amin'ny AUR amin'ny alàlan'ny fonosana damn-castile
vaovao farany: Raha te hilalao dia tsy maintsy apetrakao ireto fonosana ireto:
misokatra, zlib, table y openssl.
Raha mampiasa fizarana ny 64 potika mila mametraka kinova 32-bit ianao (matetika no manomboka lib32). Tokony ho ampy izany satria hametraka fiankinan-doha ilaina hafa izy ireo.
Nanavao ny fonosana AUR ihany koa aho.
Pejy lalao ofisialy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » <º Gamers: Damn Castilla dia misy amin'ny GNU / Linux izao
Ary ahoana no hahazoako ny lalao? tena tsara io.
Toa mahaliana fa manohy misintona azy aho.
Fampandrenesana !! Niandry fatratra ny kinova Linux amin'ity lalao ity aho. Tsy isalasalana fa iray amin'ny sangan'asan'i Locomalito.
Toa mahafinaritra, misaotra betsaka! Ho hitako raha ho an'ny Ubuntu io
Na dia toa tsara sy ny zava-drehetra aza ny lalao, dia toa ahy manokana ny dika mitovy an'ny Castlevania 2D amin'ny resaka gameplay.
Ny lalao miaraka amin'ny mekanika mitovy amin'ny Metroid sy Castlevania dia ao anatin'ny karazana fantatra amin'ny anarana hoe Metroidvenia, ary nandritra ny fotoana fohy tamin'ny lalao video dia nisotro lalao roa izy ireo, raha ny marina dia izaho no manao lalao misotro mivantana avy amin'ny Metroid (avy amin'izany Tsy hiteny eto aho satria havoaka ho an'ny ZX Spectrum)
Voavela izany antsipiriany izany satria sarotra be ny mahita ROM Castlevania amin'izao fotoana izao ary afaka mampifanaraka azy amin'ny filalaovana azy amin'ny PS2 sy / na PSP araka ny fikasan'Andriamanitra.
Azonao atao ny milalao ny an'ny Super Nintendo sy DS ... Milalao an'i Castlevania IV miaraka amin'ny Snes9X-GTK sy ny Portrait of Ruin aho miaraka amin'ny No $ GBA amin'ny alàlan'ny divay (ity emulator ao amin'ny Linux ity dia mahavita be, tsy toa an'i Desmume fa ho an'ny Linux dia mampatahotra ahy izany. ).
Okay. Farafaharatsiny mba ananako ny CD PS1-ko izay misy ny ankamaroan'ny lalao NES izay lalaovina amin'ny PS1 sy PS2.
Misaotra tamin'ny tendrony, tsy nanana hevitra momba izany aho ... Ho ela velona ny Super Metroid!
Houndix dia hoy izy:
Tena tsara izany, efa tsy nahita karazana lalao an-tsekoly taloha ho an'ny GNU / Linux :) aho.
Fanontaniana iray: misy fomba ahafahana mandrindra ny fanaraha-maso ny lalao sy ny lakile? Mampiasa kitendry Dvorak aho, ary satria vonona ny lalao amin'ny lakile amin'ny toerana Qwerty, dia tsy azo lalaovina ihany koa. Ary satria tsy mamaritra ny fifehezana na aiza na aiza amin'ny lalao izy, dia sahirana aho nahita ny lakile nampiasainy.
Mamaly an'i Houndix
Fa maninona no tsy mandeha amin'ny Steam ny lalao Locomalito?
Jereo izany, heveriko fa hanontany azy aho.
Napetrako tao amin'ny osiko fototra izany ary lalao mampiankin-doha tokoa: 3
Raha nilalao Ghost'n'Goblins tamin'ny fahazazako aho, lalao mahafinaritra tokoa, misaotra amin'ny tendrony, azo antoka fa ho tsara toy izany koa izany.
Notsidihiko izy io, saingy tsy afaka nilalao azy tao amin'ny Fedora 19. Mangataka libssl.so.1.0.0 aho, na izany aza manana ny fonosana misokatra sy libopenssl napetraka.
Misy mahay manamboatra azy ve?
Voalohany indrindra, Misaotra !!
mahaliana fa tena mitovy amin'io http://linux-os.net/gamers-maldita-castilla-ya-disponible-para-gnulinux/
Te hahafantatra ny fomba fitantanana azy aho, misintona ny kinova ho an'ny linux fa misy azo ampiharina nefa tsy manokatra na inona na inona
Copypasta iray nataon'i Son-Link, manaiky ny fiaviany. Na izany na tsy izany, azy ny lahatsoratra ary eo ambanin'ny Creative-Commons ny atiny amin'ity bilaogy ity.
Azafady, alohan'ny hitsikerana, diniho tsara ireo zavatra ireo.
Io fidirana amin'ny pejy hafa io dia copypaste an'ny lahatsoratra <b> ITY </b>, izay mitanisa ny loharano koa.
Raha ny tokony ho izy, ahoana raha tsy misy fiankinan-doha, omaly hariva alohan'ny hatory dia notantaraiko tamiko ny momba azy iray ary tokony hametraka openal ianao.
Avy eo havaoziko ny fidirana sy ny fonosana AUR, izay tsy ato an-trano aho.
Damn, ny porting ny lalao Locomalito dia handeha hipoaka tanteraka! Fotoana hiatrehana an'i Damn Castilla izay manana fotoana mahafinaritra amin'ny windows, mila mamita Hydora fotsiny ianao dia faly aho! Misaotra tamin'ny vaovao Son Link
Misy iray mitondra izany ho fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratra hafa, saingy tsy nisy fandrosoana.
Son Link ao anaty andohalambo dia tsy manomboka ny lalao, mangataka fiankinan-doha, saingy tsy hita izany ao amin'ny trano fitehirizana (toa misy dikanteny kely ilay iray)
Ahoana no anaovantsika azy io mba hilalaovana?
Ayo dia hoy izy:
Manana olana kely aho, napetraka tao Manjaro tamin'ny alàlan'ny Yaourt, nametraka tsara izy, saingy, mandeha amin'ny lalao aho, tsindrio ny Maldita castilla, ary tsy misokatra izy io. misy vahaolana ve? misaotra
Mamaly an'i Ayo
Hisintona Virtualbox aho hijery izay mety hitranga, raha tsy miankina bebe kokoa ny fiankinan-doha.
Raha vao fantatro fa manavao ny fidirana aho.
Tsy misy na inona na inona, mametraka Openal aho ary tsy misy, mbola tsy misokatra ny lalao. Tsy maintsy milavo lefona aho ary mijanona tsy milalao ity lalao mahafinaritra ity 🙁
Tsy natao ho an'ny inona fa efa lamaody taloha loatra ity lalao ity.
Ie .. fa misy ny olona tia an'ireny karazana lalao ireny, lalao Retro. ^^
Ny lamaody ankehitriny dia ny manidina anao amin'ny toerana mahavariana, mahatonga ny kilalao "Game Over" tsy ho vita.
Ary mandeha ianao ary mino azy, ny lalao misy tsiro efa taloha (aka Retro) dia lamaody kokoa noho ny hatramin'izay, koa inona no tsidiho ny Greenlight on Steam ary ho hitanao ny lalao mitovy amin'ny daka.
matoatoa dia hoy izy:
Efa nanandrana aho, mahafinaritra… mitondra fahatsiarovana maro, ary tena sarotra ny mozika!
Misy mahalala ve raha azo atao ny manavotra ny lalao?
Mandatsaka lesoka misokatra aho ary tsy misy feo, ampiasaiko avy any aur, ary mampiasa audio pulse aho, misy vahaolana ve?
Hadisoana OpenAL: 40964 (Fanombohana Audio_Tick)
Mampiasa pulsa aho ary tsy manana olana.
Nikaroka aho ary ao amin'ny forum Game Maker Studio dia milaza fa mamaha azy aho amin'ny famerenako indray ny audio, ka atombohy ny lalao, kitiho ny F11 mba hampihenana ny efijery ary sokafy pavucontrol (raha tsy apetrakao, apetrakao) ary ampifanaraho ny feony
Raha manana ny fifehezana ny volavola aho, saingy tsy mahazo na inona na inona aho castilla castilla, raha azonao atao ny mampita ahy ny rohin'ny forum izay mety hanampian'izy ireo ahy. Tsy mino aho satria mampiasa kde.
Ny kofehy dia ity, saingy amin'ny teny anglisy: http://gmc.yoyogames.com/index.php?showtopic=591293
Mampalahelo fa ity kofehy ity dia natao ho an'ny windows fa tsy linux, noho izany dia miandry feo foana aho
Misy miteny amiko ny fomba hametrahana azy, satria rehefa misintomiko azy dia manome ahy rakitra .tgz ary apetrako amin'ny alien izany ary apetrany tsara fa tsy azoko atao ny manokatra azy na aiza na aiza, ary tsy azoko hoe momba aur, azafady mba misy manazava amiko, Vaovao aho
Esory fotsiny io rakitra io any amin'ny toerana iray ary kitiho indroa ny rakitra mpihazakazaka (zahao alohan'ny fampiharana alalana)
Mianara mamantatra tsara ny lahatsoratra amin'ny sary miaraka amin'ny tesseract sy ny ocrfeeder.
Mozilla dia manakarama an'i Christopher Montgomery hiasa amin'ny codec Daala